JP Nivaas Guest House e Mayiladuthurai
Igumbi lethu lokulala elipholileyo nelitofotofo linemvakalelo eyinyani yaseKHAYA! Ingena ngokukhululekileyo abantu aba-6 kwaye ibekwe embindini kanye e mayiladuthurai. Kwaye ukufikelela lula kuzo zonke iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi.sinendlu yeendwendwe ezi-3 enye nenye yi-2 BHK.
Igumbi lethu lokulala elipholileyo nelitofotofo linemvakalelo yesixeko esiyinyani! Ingena ngokukhululekileyo abantu aba-6 kwaye ibekwe embindini kanye e mayiladuthurai. Kwaye ukufikelela lula kuzo zonke iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi.sinendlu yeendwendwe ezi-3 nganye inendlu yeendwendwe ezi-2.
Zisa uhambo lwakho lokuya e-mayeladuthurai ebomini ngokuhlala kule flethi ibanzi nokufikelela ngokulula kuyo yonke indawo yabakhenkethi ekufutshane!
Le ndlu yondwendwe itofotofo eJP Nivass Guest House, kanye kwindlela enkulu enemarike, irestaurant kunye nezikhululo zebhasi zonke ngaphakathi komzuzu omnye. ukuhamba, kuya kuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kulula kwaye kumnandi. Ngebalcony kunye nendawo yokulala ye-6 (Amagumbi okulala amabini amabini kunye noomatrasi banokubonelelwa abantu ababini abongezelelweyo kwigumbi lokuhlala). uzakuba neendawo ezininzi zokuzipholela ngaphandle, kwaye uyimizuzu embalwa kuphela ukuya kwiindawo zokutyela, ezikufuphi neetempile kunye neemarike zokutya.
Le ndlu ine-air-conditioning ine-TV, iSofa, iWardrobe kwaye ngokuqinisekileyo ibhedi enkulu yenkosi enebhedi yeprimiyamu.
Indawo yokuhlala ikumgama oziimitha ezingama-500 ukuya kwindawo yentengiso enkulu kunye neemitha ezili-100 ukuya kwitempile yasemayuranathar.
Itempile ekufutshane ye-mayuranathar ixinene kwimbali, umlinganiswa, kunye neendawo zokutyela zonke ezikumgama omfutshane.
Ukuba ubucwangcise ukutyelela yonke itempile ye-Navagraha ngosuku olunye ... ke le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala ngaphandle kwale tempile apho uya kunika ufikelelo olulula kufutshane neendawo ezinjengeetempile zamaHindu eziphawulekayo ziyenza ibe yindawo yokundwendwela edumileyo. Iitempile ezifana netempile yaseSri Vadhanyeshwar, iTempile yasePunugiswarar, iGangai Konda Cholapuram, itempile yaseSri Parimala Ranganathaswami, itempile yaseSri Kasi Vishwanathaswami, itempile yaseKurukai Sivan kunye netempile yaseDakshinamoorthy itsala abazinikeleyo abavela kulo lonke elaseMzantsi India. Iitempile ezisithoba, enye ye "navagraha" nganye zenza isiphaluka se-pilgrim esizinikezela rhoqo.
I-Suriyanar koil, i-Thingaloor, i-Vaidheeswaran koil, i-Thiruvenkadu, i-Alangudi, i-Kanjanur, i-Thirunallaru, i-Thirunageswaram kunye ne-Keezhaperumpallam, ejikeleze iMayiladuthurai yinxalenye yesiphaluka sokuhamba. I-Suriyanar koil, i-20km entshonalanga yeMailaduthurai yiziko lesiphaluka, apho zonke ezinye iitempile zakhiwe.
Siza kudibana nawe xa ufika kwaye sikubonise ngeenxa zonke, kodwa xa sele uzinzile, siya kuphuma ezinweleni zakho. Uya kuba neefowuni zethu kunye nabafowunelwa be-imeyile ngoko uzive ukhululekile ukufowunela ukuba kukho nantoni na esinokuyenza ukwenza utyelelo lwakho lube mnandi ngakumbi.
Siza kudibana nawe xa ufika kwaye sikubonise ngeenxa zonke, kodwa xa sele uzinzile, siya kuphuma ezinweleni zakho. Uya kuba neefowuni zethu kunye nabafowunelwa be-imeyile ngoko uzi…